Home स्वास्थ्य कोरोनाको उपचार आफ्नै गोजीबाट गर्नू सरकारले गर्न सक्दैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय
हंगामा खबर । काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार आफ्नै खर्चबाट गर्न बताएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जसले इन्स्योरेन्स गरेको छ उसले सोही रकमबाट र नगरेको भए खल्तीबाटै खर्च गरेर कोरोनाको उपचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
जसले इन्स्योरेन्स् गरेका छन् उनीहरुले त्यो सुविधा लिन सक्छन् अर्थात सोही रकम खर्च गर्न सक्छन् नगरेकाले आफ्नै खल्तीबाटै खर्च गर्नुपर्ने बताएका छन्,’डा. जागेश्वर गौतमले’ । इन्स्योरेन्सले पुगेन भने पनि संक्रमित आफैले नै उपचार खर्च बेहोर्नु पर्छ । अब सरकारले खर्च गर्न नसक्ने अबस्थामा पुगेको छ ।
आर्थिक रुपले विपन्न, असक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंत्तिःमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाइ कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा कोरोनको लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण निशुल्क गरिनेछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ, “तर उनीहरुले पनि कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण खर्च निजको बिमा रकमबाट नै बेहोर्नु पर्छ ।
Previous articleनेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर बने पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) – हंगामा खबर
Next articleशाही युवा शक्तिको केन्द्रीय कार्यसमिति बिस्तार (नामावलीसहित ) – हंगामा खबर